नेपाली युवाले बनाए काेराेना संक्रमितकाे उपचारमा सघाउने राेबाेट
प्रविधि स्वास्थ्य समाचार
दिनेश गौतम काठमाडौं, १२ वैशाख
कोरोना भाइरस संक्रमितलाई छुनु हुन्न । छोयो भने सर्छ । दूरी कायम गर्नुपर्छ । के त्यसो भए उनीहरूको हेरचाह र रेखदेख नै नगर्ने त ? कोरोना संक्रमितका लागि के गर्दा सहज हुन्छ ? हामीले के गर्न सक्छौँ ?
कोरोना प्रकोपपछि लकडाउन शहर । आईटीका विद्यार्थी अनिल सिंह, पङ्कज जप्रेल, पृथ्वी चौधरी र रिचन जोशीको मनले मानेन । यो समयमा केही गर्नैपर्छ । हामीले अहिले नगरे कहिले गर्ने ?
४ युवाको चिनजान विभिन्न प्रतियोगिताबाट भएको थियो । रोबोट ब्याटलदेखि देशविदेशमा हुने प्रतियोगितामा उनीहरू सहभागी हुन्थे । त्यही प्रतियोगिताबाट उनीहरूको सम्बन्ध जोडिएको थियो । त्यो सम्बन्ध अहिले महत्त्वपूर्ण भएको छ ।
रोबनाट्सबाट सिंह र चौधरी, टिम कान्तिवीरका जप्रेल र ओजटेकका जोशी छलफलमा जुटे । अन्तत: आइडिया फुराए– कोरोना संक्रमितका लागि रोबोट बनाउने ।
के गर्छ रोबोटले ?
कोरोना भाइरसको औषधि पत्ता लागेको छैन । विश्वभर फैलँदो छ । यसबाट जोगिने भनेको सामाजिक दूरी हो । संक्रमितबाट कसरी हुन्छ, टाढै बस्ने । जसले गर्दा संक्रमितको उपचारमा समस्या छ । डाक्टर नर्सलाई नै सर्ला भन्ने डर छ । यसबाट मुक्ति दिलाउन उनीहरू रोबोट बनाउन लागिपरे ।
‘रोबोटले संक्रमितका लागि औषधि, खानेकुरा, उनीहरूको बेडमा पुर्‍याउँछ,’ राेबाेट निर्माता अनिल सिंह भन्छन्, यसबाट भाइरस अर्कोलाई सर्दैन ।’
नेपालमा काेराेना संक्रमितकाे संख्या बढ्दै गएसँगै अस्पतालमा डाक्टर र नर्सहरू पनि काेराेना भाइरस संक्रमणकाे उच्च जोखिममा छन् ।
‘रोबोटले औषधि र खाना पुर्‍याउने भएपछि डाक्टर र नर्सलाई सर्ने सम्भावान कम हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘बिरामीको उपचारमा पनि कमी हुँदैन । संक्रमितको रेखदेख गर्न राेबाेट सारथी बन्नेछ ।’
उनीहरूले बनाएको रोबोट युजर फ्रेन्ड्ली छ । सजिलोसँग प्रयोग गर्न सकिने गरी बनाइएको छ । रिमोटबाट रोबोटलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ । राेबाेटमा क्यामेरा जडान गरिएको छ । ल्यापटपमा हेरेपछि कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ । डाक्टर नर्सले रिमोटबाट सजिलै कन्ट्रोल गर्न सकिने गरी बनाइएको छ ।
एउटा रोबोटले एउटा आइसोलेसनमा काम गर्छ । जतिवटा आइसोलेसन छ, त्यतिवटा राेबाेट आवश्यक पर्ने हुन्छ । अहिले २ सयदेखि ५ सय मिटरसम्म काम गर्छ । बीचमा धेरै वाल छ भने गाह्रो हुन्छ । संक्रमितले खाना वा औषधि लिनुअगाडि स्यानिटाइजर झर्छ । त्यसपछि खाना वा औषधि लिन सकिन्छ ।
अहिलेसम्म राेबाेट बनाउने खर्च उनीहरूले नै जुटाएका छन् । एउटा राेबाेट बनाउन १ लाख रूपैयाँसम्म खर्च हुन्छ । केही सहयोग रोबोटिक्स एसाेसिएन अफ नेपालले सहयोग गरिरहेको छ । अरु यी ४ युवाले नै गरिरहेका छन् ।
‘अहिले हामीले नै खर्च गरेका छौँ,’ सिंहले भने, ‘खर्च जुटाउन समस्या छ । तर, यस्तो बेलामा गर्न त छोड्नु भएन नि । अहिले राेबाेटलाई प्रयोगमा ल्याउने अवसर पनि हो ।’
राेबाेटलाई प्रयोगमा ल्याउने विषयमा उनीहरूले सरकारी निकायसँग पनि छलफल गरिरहेका छन् ।
‘स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले राम्रो प्रतिक्रिया दिनुभएको छ,’ उनले भने, अगाडि बढाउनुहोस् भन्नुभएको छ । त्यसपछि फेरि छलफल हुन पाएको छैन । यदि अस्पतालबाट पनि माग आयो भने रोबोट बनाउँछौँ । अहिले विभिन्न अस्पतालमा कुरा भइरहेको छ ।’
रोबोटबाट थर्मल गन राखेर तापक्रम जाँच गर्ने मिल्ने र स्यानिटाइजर अटोमेटिक झर्ने खालको रोबोट बनाउन लागिपरेका छन् । रेष्टुरेन्ट र घरका लागि पनि उनीहरूले रोबोट बनाउने तयारी गरेका छन् ।
‘नाफा कमाउने उद्देश्य होइन,’ उनले भने, ‘हाम्रो खर्च जुट्यो भने पुग्छ । मान्छेले गर्न नसक्ने काम रोबोटले गर्छ । यो अहिले अवसर पनि हो । हामीलाई अहिले प्रेरणा र हौसलाको खाँचो छ ।’
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख १२, २०७७, १७:३५:००